★★★★★ Entsha☼Edif 1º Linea de Playa-Centro-Free Wifi - I-Airbnb
★★★★★ Entsha☼Edif 1º Linea de Playa-Centro-Free Wifi
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguFrancisco
Indawo ephangaleleyo ye-45m² enezixhobo ngokupheleleyo kumda wolwandle (iPlaya de la Rada, iflegi eluhlaza).
Embindini we-Estepona, phambi kwePaseo Marítimo, ecaleni kweCalle Real. Ijikelezwe ziivenkile, iivenkile zokutyela, iibhari, iikhemesti, iikliniki zonyango, iPosi kunye namasebe ebhanki.
Kulula ukupaka nje umzuzu omnye ukusuka kwindlu
Unokutyelela iindawo ezifana neMarbella, iPuerto Banus, iRonda, iGibraltar, iTarifa, iMalaga kunye needolophana ezimhlophe zeentaba.
Indlu ibanzi kwaye ikhululekile, ilungele izibini kunye nezibini ezinabantwana. Yindawo efanelekileyo yokonwabela ulwandle kunye nokuphumla, kunye nokutyelela iindawo ezinomdla kwaye wenze imisebenzi kunye nazo zonke iintlobo zemidlalo.
Le ndlu iphambi kwePlaya de la Rada, eyamkelwa ngeBlue Flag ngemeko yayo entle yolondolozo kunye nomgangatho weenkonzo. Ukusukela xa ushiya i-portal de unyathele esantini, kuya kuthatha phakathi kwemizuzwana engama-30 kunye nomzuzu omnye. Ikwaphambi kweyona ndawo ibalulekileyo ye-promenade kwiCosta del Sol. Kule promenade unokungcamla iiskewers ezimnandi kunye nezitya eziqhelekileyo zaseMalaga kwiindawo zaselwandle.
Ukongeza kwindawo engaselunxwemeni, le ndlu ikwintliziyo ye-Estepona, apho unokuhambahamba kwidolophu yayo entle endala. Le ndlu ikufuphi neCalle Real, ehlala ziindawo zokutyela eziqhelekileyo, iikhefi, i-churrerías, iibhari apho unokusela khona kunye nazo zonke iintlobo zeevenkile, ezinjengeevenkile zempahla, iikhemesti, icuba ...
Ukungena kunokwenziwa ukusuka ngo-3 emva kwemini kwaye iindwendwe kuya kufuneka ziphume kwigumbi nge-12 kusasa. Ukufumaneka kokuqhagamshelana nomninimzi ukukunceda ukusombulula nayiphi na ingxaki enokuthi ivele ngexesha lokuhlala kwakho, sihlala e-Estepona.
Ukungena kunokwenziwa ukusuka ngo-3 emva kwemini kwaye iindwendwe kuya kufuneka ziphume kwigumbi nge-12 kusasa. Ukufumaneka kokuqhagamshelana nomninimzi ukukunceda ukusombulula nay…
Inombolo yomthetho: VFT/MA/25171